Mendrika ampiana ny indostria Malagasy, hoy ny filoha nitsidika ny orinasa mpamokatra fiara Malagasy tany Fianarantsoa. Hampitomboina ny famokarana mba hisian’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, ary dia nizara fitaovana sy masomboly tamina ampahana tantsaha tany an-toerana. Tsara sy mendrika ilay fihetsika, ary tokony hotohizana. Ny mampanahy anefa, dia fihetsika ivelany sy toa manao mpitari-bato vilam-bava ihany, raha jerena ny tena zava-misy sy ny fihetsika ankampobeny hatramin’izay. Ny fiara novidiany mantsy dia fiara raitra avy any ivelany, miteti-bidy hatrany amin’ny 4,4 miliara ariary. Ny zavatra nataony, dia nanafatra vary mora an-jato taoniny, izay namono antoka tanteraka ny tantsaha. Akaiky moa ny propagandy, ka tsy atao mahagaga raha mitohy indray ny kimoramora. Hampitombo ny famokarana kanefa ny tanimbary aza hototofana. Aiza ho aiza ilay nambara tany Alaotra fa hanome tany 10ha avy ho an’ny tanora tsy an’asa? Ny fanaratsiana sy famendrofendroana nentina nanonganam-panjakana tany amin’ny 10 taona lasa no haverina ankehitriny. Nolazaina fa fady ary mifanohitra amin’ny soatoavina Malagasy ny famarotana tany amin’ny vahiny, eny fa na dia ny mampanofa fotsiny aza. Folo volana lasa izay no nanambara ofisialy tamin’ny propagandy fa hivarotra tany. Tsy sanatria vao nikatona lohamalemy avokoa ny rehetra tamin’ireny ka tsy hahatsiaro sy hampahatsiahy ny lasa. Io fa lasa gidragidra ny raharaha fanotorana tany etsy andrefana kely an’Antananarivo. Manomboka fatoran’ny tantara sy todian’ny natao ve?